Madaxweynaha cusub ee Zimbabwe oo xilka loo dhaariyay
HARARE, Zimbabwe - Emmerson Mnangagwa ayaa maanta loo dhaariyay xilka Madaxweynaha dalka Zimbabwe, kadib markii uu Iscasilay Robert Mugabe.
Mnangagwa ayaa lagu dhaariyay Munaasabada ka dhacday Garoon Kubbada cagta lagu ciyaaro oo ku yaalla magaalada Harare, ee Caasimadda dalkaasi, iyadoo ay ka qeybgaleen Mas'uuliyiin kala duwan iyo marti-sharaf caalamka ka timid.
Xisbiga ZANU-PF ee talada haya ayaa u magacaabay Emmerson Mnangagwa, oo 75 sano jir ah inuu noqdo Madaxweynaha Zimbabwe.
Madaxweyniyaasha gobolka Koonfurta Qaaradda Africa, oo uu kamid yahay Madaxweynaha South Africa Jacob Juma ayaa ugu hambalyeeyay Mnangagwa xilka cusub ee loo dhaariyay.
Mnangagwa waxa uu ahaa Madaxweyne ku xigeenkii dalkaasi, kahor inta uusan xilka ka qaadin Robert Mugabe 6-dii bishan, kadib markii uu khilaaf soo kala dhex-galay.
Robert Mugabe ayaa dalkaasi soo xukumayay tan iyo 1980, mudo 37 laga joogo, waxaana uu jagada la doonayay Xaaskiisa Garace Mugabe, oo awood badana ku lahayd dowladiisa.
Militariga ayaa farageliyay xaaladda, la wareegay todobaad kahor taladii dalkaasi, waxaana ay kuu qasbeen Mugabe inuu is-casilo, si dalka Isbedel uga dhaco, islamarkaana looga saaro dhibaatooyinka dhaqaale ee ka jira.